बुधबार, जेठ ४, २०७९ ०५:४६:१३ युनिकोड
आहा रारा गोल्डकप : थ्रीस्टार क्लब आर्मीसँग पराजित रङ्गशालामा दर्शक राखिने
कास्की, ११ माघ:
बीसौँ संस्करणको आहा ! रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको खेलमा थ्रीस्टार क्लब नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबसँग पराजित भएको छ । पाँचपटकको च्याम्पियन थ्रीस्टार आर्मीसँग निरिह सावित भयो ।
सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा यही माघ ६ गतेदेखि पोखरा रङ्गशालामा जारी प्रतियोगिताको आज सम्पन्न अन्तिम क्वाटरफाइनल खेलमा आर्मीले थ्रीस्टारमाथि १–० गोलको जीत हासिल गरेको हो । आहा ! राराको इतिहासमा हालसम्म उपाधि जित्न नसकेको आर्मीले थ्रीस्टारलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा मनाङ मस्र्याङदी क्लबसँगको भेट पक्का गरेको हो ।
थ्रीस्टारका प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले राम्रो खेल्दा पनि रक्षापङ्क्तिका खेलाडी मैदानमा लड्न पुग्दा विपक्षी टोलीले गोल गर्न सकेको बताए । टोलीका केही खेलाडी घाइते भएकाले समेत आशातीत प्रदर्शन सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो । प्रतियोगिताअन्तर्गत बुधबार शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको डिफेन्डिङ च्याम्पियन मच्छिन्द्र फुटबल क्लब र सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ फुटबल क्लबबीच पहिलो सेमिफाइनल खेल हुने आयोजक सहारा क्लबले जनाएको छ ।
रङ्गशालामा दर्शक राखिने
सहारा क्लब पोखराले बुधबारदेखि सुरु हुने सेमिफाइनलका खेलमा रङ्गशालामा दर्शकलाई प्रवेश दिने भएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण सुरुआतमा दर्शकविना खेल सञ्चालन गर्दै आएकामा सेमिफाइनलदेखि खोप कार्डका आधारमा दर्शकलाई प्रवेश दिइने क्लबका महासचिव रामजीप्रसाद अधिकारीले बताए । दर्शकको प्रत्यक्ष खेल अवलोकन गर्ने चाहनाको सम्मान गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर प्रशासनले दिएको स्वीकृतिअनुसार सिट क्षमताको एक तिहाइ टिकट बिक्री गरिने छ । पोखरा रङ्गशालाको प्यारापिट १६ हजार ५०० दर्शक क्षमताको छ ।
प्रतियोगिताको फाइनल खेल आगामी माघ १५ गते हुनेछ । प्रतियोगिताको विजेताले रु १० लाख एक हजार र उपविजेताले रु पाँच लाख एक हजार पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजक सहारा क्लबका अध्यक्ष हरिराम गुरुङले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ११, २०७८, २१:४१:००
शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग ः खुमलटारको जित
बिहीबार, चैत १७, २०७८ जनता नेपाल
शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा खुमलटार युथ क्लब विजयी भएको छ । सातदोबाटोस्थिन एन्फा (अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ) कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा खुमलटारले श्री भगवती यथ क्लबलाई ४–२ गोल अन्तरले पराजित गर्दै विजयी भएको हो । पुरा पढ्नुहोस्